अन्तरवार्ता Archives - Page2of3- A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
११ चैत्र २०७४, आईतवार ०८:३५ March 25, 2018 Nonstop Khabar
तपाईंंलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ? खोटाङ जिल्ला पेम्मा गाउँमा बस्ने श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्रध्यानाध्यापक हरिनारायण राईबाट मलाई माक्र्सवादी विचारप्रति पहिलो प्रेरणा प्राप्त भयो । सोलुखुम्बु जिल्ला सोताङलुङमा जन्मेँ र हुर्के । २०३७ सालमा जेठा दाजु प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ झापामा आन्दोलनको बीचमा घाइते हुनभएछ, २०३७ सालमा जेठा दाजु बित्नुभयो । २०३८ सालमा बुबा […]
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि हजुरले के के काम गर्नुभयो ? म यस राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिइओ भएर आउँदा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपियाँ अधिकांश स्थानमा वितरण भइसकेको थियो । तर गाउँ गाउँमा प्राविधिक उपलब्ध नहुँदा पीडितहरुले सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसारको घर बनाइरहन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ताको लागि इन्जिनियर उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । […]
१८ माघ २०७४, बिहीबार ०९:३० March 25, 2018 Nonstop Khabar
नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएकाे थियाे । अाज २२ वर्ष पुगेर २३ वर्ष लागेको छ । जनयुद्धको पहलकर्तामध्येको एकजना तपाईं पनि हो । जनयुद्धको तयारी कसरी गरिएको थियो ? यो सही कुरा हो, जनयुद्ध नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अद्वितीय परिघटना हो । त्यसको तयारी आफैँमा नयाँ, चुनौतीपूर्ण, महान् र रोमाञ्चकारी खालको थियो […]
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव त भएरै छाड्यो नि ? कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ? हो चुनाव भयो तर संसदीय चुनाव नेपालको स्वाधीनता, शान्ति र समृद्धिको निकास वा समाधान होइन भन्ने पनि साबित भइछाड्यो । काङ्ग्रेस, एमाले—माकेलगायत संसद्वादी, संशोधनवादी, आत्मसमर्पणवादीहरूले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पूरा भएको, क्रान्ति आवश्यक नभएको, अब शान्ति, आर्थिक विकास र समृद्धिको समय आएको […]
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकाे निर्वाचन सम्पन्न भयाे । अहिलेकाे चुनावी परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ ? हरेक संसदीय निर्वाचनमा सपनाहरुको व्यापार हुन्छ । विकासको बकम्फुसे नाराहरु तेर्साईन्छ । र, त्यसैको आधारमा जनतालाई आफ्नो लुटेरा छनौट गर्ने अधिकार दिईन्छ । जनता त्यही आशा, सपना र बिकासको अपेक्षामा मतदान गर्न पुग्छन । र, अर्को संसदीय निर्वाचनसम्मको अबधीका […]
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अाेलीसँगकाे याे अन्तरवार्ता अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका सम्पादक विजयकुमार पाण्डेले अाेली निवासमै लिएका हुन् । अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा प्रकाशित अाेलीकाे याे अन्तरवार्ता निकै विवादमा अायाे । नेकपा एमाले र माअाेवादी केन्द्रका बीच पार्टी नै एकता गर्ने उद्देश्यका साथ चुनावी गठबन्धन बनाएर अगाडि बढिरहेका बेला अाेलीले गठबन्धन र गठबन्धनकाे अाधा हिस्सा माअाेवादी […]
चुनावी प्रचार–प्रसार कसरी अघि बढिरहेको छ ? नेकपा (एमाले) अहिले स्पष्ष्ट एजेण्डासहित चुनावी मैदानमा ओर्लिएको छ । त्यही एजेण्डा बोकेर वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु अहिले देशभरी नै चुनावी प्रचार अभियानमा जुटेका छन्् । हामी पनि स्वच्छ निर्वाचन, लोकतन्त्रको आधार, सुशासन र समृद्धिका लागि बामपन्थी सरकार’ भन्ने नारासहित चुनावी घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त बनेका छौँ । एमाले जनताको […]
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यतिबेला चुनाव खारेजी अभियानमा छ । सरकार प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाकाे चुनावमा लागिरहेका बेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले देशभर चुनाव खारेज गर्न जनतालार्इ अाह्वान गर्दै हिडेकाे छ । नेकपाले किन चुनाव खारेज गर्न खाेजेकाे हाे भन्ने विषयमा प्यूठान जिल्ला इन्चार्ज चिन्तामणी घिमिरेसँग गरिएकाे कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ । हिजाे […]
काठमाडाैं । नेकपा माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहालले साे पार्टीका एक बरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्रीलार्इ अपशब्द बाेल्दै धकेलेर काेठाबाट बाहिर पठाएकाे खुलासा भएकाे छ । पटक पटक विवादमा अाइरहने प्रचण्ड पुत्र प्रकाशले साेही पार्टीका नेता लाेकेन्द्र बिष्ट मगरमाथि यस्ताे दुर्व्यवहार गरेका हुन् । कहिले बहुबिबाह त कहिले नेता […]